Nokia က Upper-Midrange ဈေးကွက်ဘုရင်ဖြစ်လာနိုင်မလား? | MyTech Myanmar
Nokia က Upper-Midrange ဈေးကွက်ဘုရင်ဖြစ်လာနိုင်မလား?
စမတ်ဖုန်းလောကကနေ Nokia ပျောက်သွားပြီးကာမှ ခုနောက်ပိုင်း နာမည်ပြန်ရလာခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ခုချိန်ထိဆို Mi-Range ဖုန်းတော်တော်များများလည်း ထုတ်ခဲ့ပြီး Feedback ကောင်းကောင်းနဲ့ တော်တော်လည်းရောင်းခဲ့ရတဲ့ ဖုန်းတွေပါ။
Mid-Range ပိုင်းကနေ Nokia ဆိုတဲ့နာမည်ကို ပြန်ယူခဲ့ပြီး အခုတော့ HMD Global အနေနဲ့ Upper-Midrange ဖုန်းဈေးကွက်ကို လှမ်းဖို့ စကြိုးစားနေပါပြီ။ ၂၀၁၉ မှာလည်း High-End ဖုန်းတွေ မိတ်ဆက်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ Nokia 3.1, Nokia 2.1 ကနေ Nokia6တွေအထိ ထုတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းအများစုက Entry-Level – Mid-Range တွေများပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ High-End ဖုန်းတွေထုတ်မယ်လို့ ပြောထားပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ တိတိကျကျသိရတဲ့ သတင်းတွေတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လာမယ့် High-End ဖုန်းကတော့ Nokia9Pureview ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ သူကတော့ ကင်မရာ ၅လုံးနဲ့ တခြား High-End Feature တွေပါဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဆန်းသစ်ဆုံးတီထွင်နိုင်သူတွေထဲမှာ ပါဖို့လည်း ရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဈေးကွက်စနစ်ကို ချဲ့ဖို့က စမတ်ဖုန်း Accessories တွေဘက်မှာ များများရင်းနှီးပြီး စိတ်ချရတဲ့ Customer Service မျိုးတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။ High-End စမတ်ဖုန်းတွေဘက် ခြေလှည်တေ့ာ့မှာဆိုတော့ အမြတ်အစွန်းများများနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှာတော့ ကျိန်းသေပါတယ်။
Nokia အနေနဲ့ Upper-Midrange ဈေးကွက်မှာ ဘုရင်ဖြစ်လာနိုင်မလား? Xiaomi ကိုရော ကျော်နိုင်ပါ့မလား ?
High-End ဖုန်းတွေတောင် ထုတ်ထားသေးတယ်ဆိုတော့ Nokia အနေနဲ့ မထုတ်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Xiaomi လို ဈေးကို တတ်နိုင်သမျှ သက်သာအောင် ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nokia လည်း Xiaomi ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ ကျိန်းသေပါပဲ။
စမတျဖုနျးလောကကနေ Nokia ပြောကျသှားပွီးကာမှ ခုနောကျပိုငျး နာမညျပွနျရလာခဲ့တယျလို့ ပွောရမှာပါ။ ခုခြိနျထိဆို Mi-Range ဖုနျးတျောတျောမြားမြားလညျး ထုတျခဲ့ပွီး Feedback ကောငျးကောငျးနဲ့ တျောတျောလညျးရောငျးခဲ့ရတဲ့ ဖုနျးတှပေါ။
Mid-Range ပိုငျးကနေ Nokia ဆိုတဲ့နာမညျကို ပွနျယူခဲ့ပွီး အခုတော့ HMD Global အနနေဲ့ Upper-Midrange ဖုနျးဈေးကှကျကို လှမျးဖို့ စကွိုးစားနပေါပွီ။ ၂၀၁၉ မှာလညျး High-End ဖုနျးတှေ မိတျဆကျလာဖို့ရှိပါသေးတယျ။
ဈေးကှကျထဲမှာဆိုရငျတော့ Nokia 3.1, Nokia 2.1 ကနေ Nokia6တှအေထိ ထုတျလိုကျတဲ့ဖုနျးအမြားစုက Entry-Level – Mid-Range တှမြေားပါတယျ။ လာမယျ့နှဈမှာ High-End ဖုနျးတှထေုတျမယျလို့ ပွောထားပမေယျ့လညျး ခုခြိနျထိ တိတိပပသိရတဲ့ သတငျးတှတေော့ မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ လာမယျ့ High-End ဖုနျးကတော့ Nokia9Pureview ဖွဈဖို့မြားပါတယျ။ သူကတော့ ကငျမရာ ၅လုံးနဲ့ တခွား High-End Feature တှပေါဦးမှာဖွဈပွီးတော့ အဆနျးသဈဆုံးတီထှငျနိုငျသူတှထေဲမှာ ပါဖို့လညျး ရညျရှယျထားပုံရပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ဈေးကှကျစနဈကို ခြဲ့ဖို့က စမတျဖုနျး Accessories တှဘေကျမှာ မြားမြားရငျးနှီးပွီး စိတျခရြတဲ့ Customer Service မြိုးတညျဆောကျဖို့လိုပါတယျ။ High-End စမတျဖုနျးတှဘေကျ ခွလှေညျတေ့ာ့မှာဆိုတော့ အမွတျအစှနျးမြားမြားနဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခု ဖွဈလာတော့မှာတော့ ကြိနျးသပေါတယျ။
Nokia အနနေဲ့ Upper-Midrange ဈေးကှကျမှာ ဘုရငျဖွဈလာနိုငျမလား? Xiaomi ကိုရော ကြျောနိုငျပါ့မလား ?
High-End ဖုနျးတှတေောငျ ထုတျထားသေးတယျဆိုတော့ Nokia အနနေဲ့ မထုတျနိုငျစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Xiaomi လို ဈေးကို တတျနိုငျသမြှ သကျသာအောငျ ထုတျနိုငျတယျဆိုရငျတော့ Nokia လညျး Xiaomi ရဲ့ ပွိုငျဘကျကောငျးတဈခု ဖွဈလာနိုငျတယျဆိုတာတော့ ကြိနျးသပေါပဲ။
MyTech Myanmar2018-12-08T11:29:55+06:30December 7th, 2018|Mobile Phones, News, Nokia|